Playnomics: Amụma Aka Nweta Ahịa Ekwentị (AVP) | Martech Zone
Ellingzụta ngwa mkpanaka gị bụ nnukwu olu, atụmatụ dị ala ma nwekwaa ike ịnweta ụzọ ma hụ na ndị ahụ na-agbanwe, nọrọ, ma gbasaa dị ka ndị ahịa. N'ebe ahia ahia di iche-iche, o di nkpa ighota ebe you're na enweta ezigbo mma nloghachi na itinye ego. A naghị atụle nke ahụ naanị site na ịpị-pịa-ihe ndu ndu nke mobile ahịa ga-ghọtara.
Ọnụọgụ ndị ahịa (CLV ma ọ bụ CLTV), ọnụ ahịa ndị ahịa oge niile (LCV), ma ọ bụ uru onye ọrụ ọ bụla (LTV) bụ amụma nke uru enyere na mmekọrịta niile nke ọdịnihu na onye ahịa maka oge mmekọrịta ha na akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ndị njikwa azụmaahịa nwere ike ịkọ ọnụ ahịa ndị ahịa n'oge ndụ ha niile na ịlaghachi na itinye ego n'ime ụbọchị azụmaahịa na Playnomic's Acquisition Valred Predictor na 75% ziri ezi. Nnweta Uru Predictor na-enye ndị na-ere ahịa aka ịmata ọwa na-enye nloghachi kasịnụ na ntinye ego. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịhazigharị mgbasa ozi na-emefu ọwa na mgbasa ozi kachasị elu na ezigbo oge maka ROI kachasị.
Nsonaazụ sitere na AVP mechiri emechi beta na-egosi na 5% nke ndị ọrụ buru amụma na ha ga-aba uru nke ukwuu site na ngwa AVP, gụrụ karịa 75% nke ego niile na ụbọchị 45 mbụ. Bido taa ndị mmepe niile ghere oghe sonyere beta na-emeghe iji nweta AVP ngwa ngwa.
Eburu amuma izizi nke oma, akparamagwa onye eji eme ihe bu ihe bara uru nke ndi ahia nwere ike inwe. Nsonaazụ izizi gosipụtara ngwa ọrụ AVP anyị na-ebu amụma uru ndụ niile nke nrụnye nwere ihe karịrị 75% ziri ezi site na ntanetị ahịa, ma akwụ ụgwọ, ntụgharị aka ma ọ bụ isi mmalite. Ọ bụ nnukwu mmụba na-aga n'ihu n'ịchọpụta mmefu na itinye aha ya maka ndị njikwa nnweta onye ọrụ. Chethan Ramachandran, onye isi oche nke Playnomics
Enweghi usoro ịkọwapụta, ịgbakọ ụbọchị ROI na ụbọchị ịkwụghachi ụgwọ site na nnweta ihe na mgbasa ozi ahịa nwere ike ịchọ ọnwa nke nchịkọta data gafee ọtụtụ ebe dị iche iche. Site na AVP, ọ ga-ekwe omume iwepụ ndị ahịa ahụ na-ejighị n'aka na ịchọta ndị ahịa kachasị ọnụ ahịa site na ịnye amụma ziri ezi karịa ịzụrụ na-akwụ ụgwọ naanị. Nnweta Uru Predictor jiri Playnomics 'usoro igwe mmụta dị elu nke na-anakọta, nyocha, ma gụọ omume onye ọrụ yana amụma amụma ziri ezi, ọbụlagodi na-agbanwe agbanwe gburugburu ebe obibi dijitalụ.
Ekwentị mkpanaaka, ihe njiri mara nchịkọta ikpo okwu nke na-arụ ọrụ na ndị ahịa dị ka Supercell, EA, Square, na Kayak, na-arụkọ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya na Playnomics iji nye ndị ahịa ahịa Nnweta Bara Uru.
Ekwentị mkpanaaka na-enye ndi na ere ahia ngwa otu SDK maka udiri aha mmadu. Site na ijikọ ọnụ na AVP, ndị ahịa anyị nwere ike ịkọ uru ndụ nke ndị mmekọ mgbasa ozi ha na ọwa ha, na-egosipụtakwa ihe ịrịba ama nke mmalite nke isi mmalite nwere ike bụrụ ROI dị mma. Tonweta usoro ọdịnihu dị ka nke a bụ ndị na-agbanwe egwuregwu maka ndị na-ere ngwa na-achọ ịgbanwe ngwa ngwa maka mkpọsa ha maka arụmọrụ ka mma. Peter Hamilton, CEO nke Ihe na-enye
Tags: nnweta uru amụmaKpọgheahịa ndụ urundu ndundụ uru amụmalvvmobile ngwangwa mkpanaakasmartphonengwa ngwa